Italy PM pays respects at the Day of the Victims of COVID | Italy travel news
Vaovao momba ny dia any Eropa • Naman'i eTurboNews • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny dia any Italia • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona
Ny PM Italia dia manome fanajana amin'ny Andron'ny niharam-boina tao COVID
Fahatsiarovana ireo maty tamin'ny COVID ny praiminisitra italianina tamin'ny Andron'ny niharam-boina
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Ny PM Italia dia manome fanajana amin'ny Andron'ny niharam-boina tao COVID
Ny praiminisitra italiana, Mario Draghi, dia tao Bergamo androany ho an'ny Andron'ny niharam-boina tao COVID.
Ny praiministra italiana dia nifidy an'i Bergamo ho tandindon'ny tanàna ny onja voalohany amin'ny areti-mandringana hanomezam-boninahitra ireo maty marobe avy amin'ny COVID-19.
Nametraka satro-boninahitra tao amin'ny fasana Monumental ilay praiminisitra, avy eo nankany amin'ny Parco della Trucca hanokanana ny Bosco della Memoria.
Hoy ny PM: Ity toerana ity dia tandindon'ny fanaintainan'ny firenena iray manontolo.
“Andro feno alahelo sy fanantenana feno ny anio. Tiako ianareo hahatsapa ahy ho akaiky ahy, ao anaty alahelo sy fanantenana, ”hoy ny praiminisitra Italiana Mario Draghi nandritra ny fahatsiarovana ireo niharan'ny COVID tany Bergamo.
Ny praiminisitra Mario Draghi no nisafidy Bergamo ho toy ny tandindon'ny tanàna ny onja voalohany an'ny areti-mifindra hanomezam-boninahitra ny fahafatesan'ny COVID maro any Italia. Izany dia niavaka tamin'ny fotoanan'ny Fetim-pirenena ho an'ireo niharam-boina izay hampivondrona ny firenena iray manontolo amin'ny fandefasana lakolosim-piangonana sy fotoana fitadidiana any amin'ny fasana.
Ny praiminisitra dia nametraka satro-boninahitra tao amin'ny fasana Monumental, avy eo nanao fitsidihana sy kabary tao amin'ny Parco della Trucca tamin'ny fitokanana ny Bosco della Memoria niaraka tamin'ny Ben'ny tanànan'i Bergamo, Giorgio Gori, ary ny Eveka, Francesco Beschi.
Tao amin'ny kabariny dia niresaka momba ny fampielezana vaksiny i Draghi: “Ny governemanta, fantatrao tsara, dia manolo-tena hanao vaksiny betsaka araka izay azo atao ao anatin'ny fotoana fohy indrindra.
“Androany, nanome ny heviny tsara momba ny AstraZeneca ny masoivohon'ny fitsaboana eropeana. Ny fampielezana vaksiny dia hitohy amin'ny tanjany, miaraka amin'ny tanjona kendrena. Ny fitomboan'ny famatsiana vaksininy sasany dia hanampy amin'ny fanemorana ny fahatarana amin'ireo orinasa mpamokatra zava-mahadomelina hafa. Izahay dia efa nandray fanapahan-kevitra hentitra amin'ireo orinasa tsy mitandrina ny fifanarahana. ”
Notsiahivin'ity praiminisitra ity fa “mbola tsy afaka mifamihina isika, saingy ity no andro tokony hahatsapantsika firaisankina bebe kokoa. Manomboka eto, manomboka amin'ity toerana ity izay mahatadidy ireo izay tsy eo intsony. Ao amin'ity tanàna ity dia tsy misy olona izay tsy nanana olona na fianakaviana tsy voakasiky ny virus. ”
Avy eo nitodika tany amin'ny mponin'i Bergamo izy: “Efa niaina andro mahatsiravina ianao izay tsy nisy fotoana akory nitomanianao ireo olon-tianao, niarahaba azy ireo ary niaraka tamin'izy ireo farany. Betsaka ny sary amin'ity voina ity izay niantraika tamin'ny olona rehetra tany Italia sy manerantany. Ny iray ambonin'izany rehetra izany dia tsy azo esorina: ny andrin'ireo kamio miaramila feno vatam-paty. Ny harivan'ny 18 martsa teo, herintaona katroka lasa izay.
“Ity hazo ity dia tsy ahitana afa-tsy ny fahatsiarovana ireo niharam-boina marobe izay alehan'ny eritreritsika mampihetsi-po ankehitriny. Ity toerana ity dia tandindon'ny fanaintainan'ny firenena iray manontolo. Ny filohan'ny Repoblika dia efa nijoro ho vavolombelona momba izany tamin'ny fanatrehany ny fahatsiarovana ny 28 jona tao amin'ny Fasana Monumental.
“Eo koa ny toeran'ny fanoloran-tena manokan-tena ataontsika ankehitriny. Eto izahay hampanantena an'ireo zokinay fa tsy hitranga intsony izany fa ny olona marefo dia tsy karakaraina sy arovana. Amin'ity fomba ity ihany no hanajantsika ny fahamendrehan'ireo izay nandao antsika. Amin'ity fomba ity ihany no hanaovan'ity hazo fahatsiarovana ity ho toerana an'ohatra fanavotana antsika. Eto izahay mba hankalaza ny fahatsiarovana mba tsy halazo ny fahatsiarovana izay nitranga tamin'ny lohataona tamin'ny taon-dasa. "
Ny fanajana "izay ananantsika amin'ireo nandao antsika dia tokony hanome antsika ny hery hanarenana ity tontolo nofinofisiny ho an'ny zanany sy ny zafikeliny", hoy i Draghi namarana.
Ny "vondrom-piarahamonina Bergamo iray manontolo dia naneho ny fahaizany mamaly, manova ny alahelo sy ny zava-tsarotra ho faniriana fanavotana, famerenana amin'ny laoniny. Ny ohatra nasehony dia sarobidy ho an'ny Italiana rehetra izay, azoko antoka fa tsy andriko ny hampiakatra ny lohany, hanomboka indray, hanafaka ny heriny izay nahatonga ity firenena ity ho mahafinaritra. Ary eto aho androany mba hanao fisaorana ary hanolo-tena miaraka aminareo rehetra hanarina fa tsy manadino. ”